Mitohy ny fisamborana ireo Shiita any Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy
Navotsotra i Rustamov rehefa avy nohadihadiana
Voadika ny 14 Novambra 2021 5:43 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Español, عربي, Português, English
“Moske Bibi-Heybat, Baku, Azerbaijan” avy amin'i Yasser Alaa Mobarak, AFIAP, AICS, nampiasana lisansa CC BY-NC-ND 2.0
Ity lahatsoratra nosoratan'i Ismi Aghayev ity dia navoaka voalohany tao amin'ny OC Media. Navoaka eto indray ny lahatsoratra nasiam-panitsiana eo ambany fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tamin'ny 25 Oktobra, notanan'ny Sampan-draharahan'ny Fiarovam-panjakana i Ahliman Rustamov, teolojiana sady mpitondra fivavahana teo aloha tao amin'ny Moske Haji Javad ao Baku. Rustamov no olo-malaza Shiita farany nokendren'ny manampahefana tamin'ny fisamborana miharihary ireo olo-malaza Shiita ao amin'ny firenena. Navotsotra i Rustamov rehefa avy nohadihadiana.
Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny OC Media, nilaza i Gasim Rustamov, zanakalahin'i Rustamov, fa nalain'ny mpiasan'ny Sampan-draharahan'ny Fiarovam-panjakana ny “bokim-pivavahana miisa 15 eo ho eo” izay an'ny rainy. Tsy fantatry ny fianakaviana ny tena antony nitazonana an'i Ahliman Rustamov.
Nilaza ny manampahaizana manokana ao an-toerana fa i Rustamov no niharam-boina farany tamin'ny fitohizan'ny fifanenjanana amin’ Iran. Na dia samy manana mponina Shiita betsaka aza ny firenena roa tonta dia efa nampiahiahy ireo manampahefana laika ao Azerbaijan ireo mpitondra fivavahana.
“Efa nanatri-maso izany imbetsaka izahay. Na nandritra ny vanim-potoana Sovietika na taorian'ny fahaleovantena. Nisy ny fisamborana toy izany,” hoy i Zardusht Alizade, mpandinika ara-politika sady mpanao politika mpanohitra teo aloha, raha niresaka tamin'ny Turan News Agency. “Tsy mino kosa aho aloha fa misy teolojiana vitsivitsy hanao fanonganam-panjakana eto Azerbaijan. Mazava ho azy fa noforonina io zava-misy io ary efa mahazatra ny fiarahamonina izany. Raha misy loza mitatao amin'ny filaminam-pirenena, nahoana no tsy nandray fepetra ho fiarovana mialoha ny [manampahefana]?” Noforonin'ny manampahefana fotsiny izany, hoy i Alizade tao anatin'ny antsafa.
Tamin'ny 19 Oktobra, notanana i Sardar Babayev, i Jalal Shafiyev, i Gadir Mammadov, ary i Tamkin Jafarov, izay samy mpikambana avokoa ao amin'ny Fikambanan'ny Mpitondra Fivavahana, fikambanana misolotena ny manam-pahaizana sy ny mpitondra fivavahana Shiita ao Azerbaijan. Nambaran’ny havany fa nalain’ny polisy ny finday sy ny solosaina nandritra ny fisamborana. Navotsotra tsy nisy fiampangana i Shafiyev, i Mammadov ary i Jafarov tamin'ny 26 Oktobra, raha mbola tazonina am-ponja kosa i Sardar Babayev ary voampanga tamin'ny famadihana tanindrazana, ka miatrika fanamelohana migadra mandra-pahafaty raha hita fa meloka. Voaheloka higadra telo taona an-tranomaizina i Babayev tamin'ny taona 2017 noho ny fiampangana azy ho nandika ny fepetra takiana amin'ny fombafomba fanaovana lanonana ara-pivavahana. Navotsotra tamin'ny Febroary 2020 i Babayev, imam ao amin'ny Moske Juma ao amin'ny distrikan'i Masalli ao Baku. Tsy nanao fanambarana momba ny fisamborana sy ny fiampangana an'i Babayev ny manampahefana ao Azerbaijan.
Tamin'io andro io ihany, notanana am-ponja ireo mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Mpitondra Fivavahana, nisy mpitondra fivavahana Shiita sady teolojiana malaza iray hafa, Ilgar Ibrahimoglu, nogadraina. Navotsotra ora maromaro taorian'ny fanadihadiana i Ibrahimoglu, izay filohan'ny Foibe ho Fiarovana ny Fahalalahana Ara-pivavahana sy ny Feon'ny Fieritreretana.
Nilaza ilay mpikatroky ny fiarahamonim-pirenena Anar Mammadli hoe: “mampidi-doza ny fikasana” hampifandray ny mpitondra ny vondrom-piarahamonina Shiita amin'ny sampan-draharahan'ny Fiarovana Manokana ao Iran. Hoy i Mammadli tao amin'ny lahatsoratra Facebook:
Raha izany lojika izany, azo atao ny mampifandray ireo mpitarika ny vondrom-piarahamonina Sonita amin'ny Mpitandro ny Filaminana manokana ao Arabia Saodita, Tiorkia, Pakistan ary Qatar. Ary ny vondrona Kristiana amin'ny firenena Tandrefana. Andraikitry ny manampahefana ny manova izany fanmpielezan-kevitra izany. Na ny governemanta na ny fampahalalam-baovao miara-miasa dia tokony miala amin'ny fampidirana ireo mpitondra fivavahana amin'ny resaka politika amin'ny hevitra manakiana sy amin'ny fanehoana azy ireo ho mpitsikilo. Miteraka fomba fijery tsy mahafinaritra ho an’ny hoavin’ny firenena ary tsy misy ifandraisany amin’ny fitondrana laika” izany fironana izany.